मलेसियामा नयाँ कामदारका लागि रोजगारी बारे दूतावासको यस्तो छ स्पस्टोक्ति ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
मलेसियामा नयाँ कामदारका लागि रोजगारी बारे दूतावासको यस्तो छ स्पस्टोक्ति !
मलेसियामा नयाँ कामदारका लागि रोजगारी नखुलेको राजधानी क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। उसले शुक्रबार विज्ञप्ती सार्वजनिक गर्दै मलेसियामा रोजगारी खुलेको र राजदूतावासबाट माग पत्र प्रमाणीकरण भइरहेको भन्ने कुरा निराधार रहेको स्पष्ट पारेको छ।
दूतावासका द्धितीय सचिव प्रतिक कार्कीद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा उल्लेख छ, ‘कोभिड–१९ को प्रभाव नियन्त्रण गर्न मलेसियाले २०२० को मार्च १८ देखि लागू गरेको आवागमन नियन्त्रणसँगै स्थगित गरिएको मागपत्र प्रमाणीकरणको कार्य हालसम्म सूचारु गरिएको छैन।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार मलेसिया पुगेपछि श्रमिकहरू सरकारी अनुमति प्राप्त क्वारेन्टाइनमा ७ दिन बस्नुपर्नेछ । श्रमिकलाई क्वालालम्पुरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट मात्रै प्रवेशको अनुमति दिइएको छ । गृहमन्त्री जैनउद्दिनका अनुसार यी सबै प्रक्रियाका लागि लाग्ने खर्चको जिम्मेवारी रोजगारदाता कम्पनीकै हुनेछ । नेपाल र मलेसियाको श्रम सम्झौताअनुसार पनि भिसा प्रक्रियामा लागेको सबै खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्ने उल्लेख छ ।
सम्झौताअनुसार स्वास्थ्य परीक्षण र सुरक्षा जाँचमा लागेको खर्च मात्रै श्रमिकले नेपालमा बुझाउनुपर्नेछ । त्यो शुल्क पहिलो महिनाको तलबमार्फत् रोजगारदाताले भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । हाल मलेसियामा एक लाख ७० हजारको हाराहारीमा नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् ।